ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒပညာရှင်များယောဘသည် Duty Template ကို – JobDescriptionSample
နေအိမ် / လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒပညာရှင်များယောဘသည် Duty Template ကို
ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒပညာရှင်များယောဘသည် Duty Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် Leave 268 views
အသေးစိတ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များဖျေါပွခကျြ Template: အလုပ်
ရပ်ရွာကျန်းမာရေးလုပ်သားများလုပ်ငန်းခွင်ဖျေါပွခကျြ Template ကို
ဥပမာအားမူးယစ်ဆေးဝါးများနေရာအတွက်ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒနည်းလမ်းများနှင့်အယူအဆသုံးပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ဆောင်သွားရန်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများကွန်ပျူတာဇီဝဗေဒ, proteomics ဇီဝဗေဒ . Genomics သတင်းအချက်အလက်ဆန်းစစ်နှင့် processing များအတွက်ရယူဖော်မြူလာ layout စေခြင်းငှါ,, အပိုဆောင်းအော်ဂဲနစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရင်းများသို့မဟုတ်.
ကိရိယာ၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ, လတ်ဆတ်တဲ့ဇီဝဓါတုဗေဒ, သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြောင်းစည်းဝေးကြီးများတက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းများဆန်းစစ်နေဖြင့်.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာမျိုးရိုးလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသကဲ့သို့ဇီဝ-based ရေးရာအဘို့စံချိန်နှင့်ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတူရိယာကမ်းလှမ်းရန်, မျိုးဗီဇ-စကားရပ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်, နှင့်မျိုးဗီဇ function ကိုသန်နိဋ်ဌာနျ.
ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်ကြောင်းဥပမာအားဖြင့်ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒကဲ့သို့သောနေရာများအတွက်ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ် tools တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုပျငနျးကိုညွှန်ကြား, transcriptomics, metabolomics, နှင့် proteomics.
လတ်ဆတ်တဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်တိကျတဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းတာဝန်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ပစ္စုပ္ပန် software ကို customize.
web based ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒနည်းလမ်းများ Generate သို့မဟုတ်အသွင်ပြောင်း.
unsupervised နှင့်စောင့်ကြည့်စက်သင်ယူမှုအပါအဝင်ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒ algorithms စတိုင်နဲ့အကျိုးရှိရှိအသုံးချ, တက်ကြွဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, သို့မဟုတ်သော graphical algorithms.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖတ်စာအုပ်များမှတဆင့်သုတေသနလုပ်ငန်းအကျိုးကျေးဇူးများကို conversation, စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုတင်ပြချက်များ, သို့မဟုတ်ခံဝန်အစီရင်ခံစာများ.
ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပုံဖော်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း proteomic -genomic စာရင်းများ.
ကိစ္စရပ်များကိုသုတေသနပြုဖို့သုံးသပ်သူများနှင့်အတူ Check, နည်းပညာများဗဟိုပြုအဖြေတွေကိုအဆိုပြု, သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ကြောင်းနည်းစနစ်တည်ထောင်ရန်.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအဖြစ်ကြီးမားသောအချက်အလက်စာရင်းများအတွက် Genomics စီးရီး data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသဘာဝကဒေတာ, လက်တွေ့သို့မဟုတ်အခြေခံသုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့်အချက်အလက်ဒေတာများ.
ထိုကဲ့သို့သောမြှင့်တင်ရန်ဥပမာအဖြစ်ကဏ္ဍများအနေဖြင့်အကွံဉာဏျကိုရှာ, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှ.
ကလူ Genomics နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏အကျဉ်းချုပ်ကိန်းဂဏန်းများ Make.
ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒဖြစ်ကြောင်း tool များ၏ဌန်နှင့်အသုံးပြုမှုအတွင်းကိုအခြားသူများအားပြောပြပါ.
ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒ software နှင့်စာရင်းများမှတစ်ဦးချင်းစီ interfaces တိုးမြှင့်.
အခြားသူများကိုလက်ရှိပြောနေကြသည်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ပေးဝေနေတပြင်လုံးကိုအသိပညာပေး, သင်ဖန်တီးထားသောခံရအချက်တွေကိုနားလည်ရန်အချိန်ယူ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးခွန်းများကို, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းသာဓကမှာလမ်းပြနေမဟုတ်.
အကြောင်းပြချက် critical-အတွေးအခေါ်-အသုံးပြုခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်စဉ်းစား, ကောက်ချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခမှအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်.
သို့ချဉ်း ကပ်. -Pick သင်ယူခြင်းနှင့်အသစ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာနေသို့မဟုတ်နည်းပြအလုပ်ကိုလာသောအခါညာဘက်ပြဿနာများအတွက်သင်ကြားရေး / ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်များလျှောက်ထား.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စစ်ဆေးခြင်း-TrackingPEREvaluating ထိရောက်မှု, မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကုစားအရေးယူသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ဖို့.
သူတို့လုပျနေချိန်တွင်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်လူမှု othersA တုံ့ပြန်မှုများနှင့် comprehension သတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်း.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ညှိနှိုင်းရေး-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ အစီအမံ.
အဆင့်မြင့်ပြဿနာရှုပ်ထွေးအခက်အခဲများခွဲခြား-ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ options အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ရွေးချယ်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းဒေတာသုတေသနပြု.
လူတစ်ဦးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မှအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-ရယူထားသောစစ်တမ်း tools များသို့မဟုတ် Generating နှင့်နည်းပညာလိုအပ်ပါတယ်.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်းအစီအစဉ်များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, သတ်မှတ်ချက်များကျေနပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် Device များ.
ကွဲပြားခြားနားသော application များအတွက် coding-ရေးသားကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-ကိုကြည့်ရှုခြင်းအပိုဆောင်းအချက်ပြမှုများ, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်အညွှန်းကိန်းသည်လက်ရှိတွင်မှန်ကန်စွာ operating တစ်ဦးပစ္စည်းလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင်းကို upkeep ကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးအခါဆုံးဖြတ်ခြင်း.
မရှိမဖြစ်နည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ပြင်ဆင်ခြင်း-ပြုပြင်ခြင်းမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးကုန်စည်သုတေသန-ဖျော်ဖြေစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်, န်ဆောင်မှုများ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
analysis-ကိုစူးစမ်းအစီအစဉ်မျိုးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်အဘယ်အရာကိုများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှု, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အဖြစ်အခြေအနေများအကျိုးကျေးဇူးများကို impact နိုင်ပါတယ်.
ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်များသင့်လျော်သောအသုံးချမှသတင်းရပ်ကွက်များ-တှေ့ကွုံနနှင့်ရယူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, tools တွေ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအထူးသဖြင့် function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်-အဆောက်အအုံ၏ကြီးကြပ်မှု, အားတက်စရာ, သူတို့အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ရှေးရှေး directing, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးကလူအဆုံးအဖြတ်.
ကျော်လွန်2နှစ်ပေါင်း, ရန်-Up နှင့်တချို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းအပါအဝင်
ဇှဲကောငျးခွငျး – 90.20%
အာဏာ – 84.76%
အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စ – 78.96%
လူမှု Direction အဖွဲ့ – 78.95%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 85.71%
ဖိအား Threshold – 84.11%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 92.37%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 91.72%
ခွန်အား – 89.80%
လွတ်လပ်ခြင်း – 89.00%
တိုးတက်ရေး – 92.97%
analytical အတွေးအခေါ် – 97.00%
Fischer စစ်ဆင်ရေး Technician ဖျေါပွခကျြ Template ကို
ရိနာစွဲများအတွက်အလုပ်အလုပ် devices များ, ထိန်းချုပ်မှု, or using nuclear energy to aid scientists in …